Warar - Hubi sababta ay dusha sare ee kartoonku isu bedbeddelaan.
Hubi sababta ay dusha sare ee kartoonku isu bedbeddelayaan.
Marka laga hadlayo la'aanta kartoonada jiingado, dad badan ayaa ka fikiri doona kartoonka jiingada. Xaqiiqdii, ifafaalahaani lama mid aha tan la rogay. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka baartid dhowr dhinac sida alaabta ceeriin, mashiinada halbeegga ah, biriijyada, makiinadaha dhajinta, suumanka wax lagu xambaaro, roogayaasha cadaadiska, iyo qeybta dambe ee leenka dhoobada si loo falanqeeyo sababaha loona xaliyo.
(1) Qalabka ceeriin
Waraaqda jiingadda loo adeegsaday waa inay buuxisaa heerarka qaranka. Tusaale ahaan, 105 garaam oo warqad jiingado ah, soo saaraha warqadda aasaasiga ahi waa inuu la kulmaa heerka heerka B-ga. Cadaadiska giraanta ee warqadda heerka C kuma filna, waana sahlan tahay in la keeno burburka jiingadda.
Shaqada kontoroolka tayada ee warshad kasta oo kartoon ah waa inay jirtaa. Shirkaddu waxay marka hore dejisaa heerka shirkadda, ka dibna waxay u baahan tahay alaab-qeybiye inuu ku sameeyo si waafaqsan heerka.
(2) Mashiinka halbeegga ah
Heerkulka roogaalka jiingado ma ku filan yahay? Marka heerkulka usha jiingadu aysan ku filnayn, dhererka jiingadda la sameeyay kuma filna. Guud ahaan, shirkad si wanaagsan loo maareeyay ayaa qof u soo diri doonta si uu u hubiyo heerkulka dhammaan safka isku imaatinka (waxaa lagula talinayaa in qofka mas'uulka ka ah kululeeyaha uu sameeyo shaqadan). Marka dhibaato heer kulka la helo, kormeeraha heeganka ku jira iyo kabtanka mashiinka ayaa lagu wargeliyaa waqtiga, makaanikyada ayaa lagu wargeliyaa inay wax ka qabtaan, dhammaan baalayaasha kululaynta ayaa la kormeeraa oo dib loo habeeyaa bil kasta.
2) Wasakhda dusha sare ee duubista jiingada.
Kahor intaadan bilaabin maalin kasta, rullaluistemadka jiingadsan ayaa horay loo sii kululeeyay laguna masaxay saliid mashiinka fudud si loo nadiifiyo qashinka iyo qashinka ku yaal rullaluistemadka jiingadda.
3) Isku hagaajinta farqiga u dhexeeya rollers waa mid aad muhiim ugu ah wax soo saarka.
Farqiga u dhexeeya rullaluistemadka dhejiska ah iyo rullaluistemadka rooga guud ahaan waa markii duubista jiingadda la kululeeyo muddo 30 daqiiqo ah si loo kordhiyo ballaadhinta rullaluistemadka rooga. Dhumucda warqad miisaankeedu ugu hooseeyo shirkadda ayaa loo isticmaalaa sidii farqiga. Waa in la hubiyaa maalin kasta ka hor inta aan la bilaabin mashiinka.
Farqiga u dhexeeya rullaluistemadka rooga iyo rullaluistemadka cadaadiska guud ahaan waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo xaaladda wax soo saarka, waana in si wanaagsan loo habeeyo.
Farqiga u dhexeeya rullaluistemadka roogayaasha sare iyo roobareegyada hoose ee corrugating waa mid aad muhiim u ah. Haddii aan si sax ah loo hagaajin, qaabka jiingadda la soo saaray waxay noqon doontaa mid aan caadi ahayn, taas oo ay u badan tahay inay keento dhumuc aan ku filnayn.
4) Heerka xirashada duubista jiingadda.
Hubi heerka wax soo saar ee duubka jiingado wakhti kasta, haddii ay lagama maarmaan tahay in la beddelo. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo tungsten carbide roogaal jiingado, maxaa yeelay, ay iska caabin ah xiran sare yareyn kartaa qiimaha wax soo saarka. Xaaladda hawlgal xasilloon, waxaa lagu qiyaasay in kharashka lagu soo celin doono 6-8 bilood gudahood.
(3) Ka gudub isgoyska xaashida
Ha ku aruursan waraaqo hal-dhejis ah oo aad u badan oo dulmara biriijka. Haddii xiisaddu aad u weyn tahay, waraaqda hal-taaylka ah ayaa duugmi doonta oo kartoonku ma noqon doono mid qaro weyn. Waxaa lagugula talinayaa inaad rakibto nidaam maareynta wax soo saarka kumbuyuutarka, kaas oo si wax ku ool ah uga hortagi kara dhacdooyinka noocaas ah inay dhacaan, laakiin hadda in badan oo soosaarayaasha guryaha ah ayaa haysta, laakiin ma isticmaali doonaan, taas oo ah qashin.
Markii aad dooranaysid soo saaraha gogosha wareejinta warqad, taxaddar taxaddar leh waa in la siiyaa si looga fogaado wax soo saarka inay saameyn ku yeelato hawo qaadashada duulista. Haddii hawo qaadashada biriijku aad u ballaaran yahay, aad ayey u fududahay in sababo in jiingadu ay burburto. Fiiro gaar ah u yeelo wareegga dhidib kasta, oo si joogto ah u hubi isbarbar dhigga qayb kasta oo fiiro gaar ah u yeelo mar walba.
(4) Mashiinka dhajinta
1) Rullaluistemadka riixaya ee rullaluistemadka koollada waa mid aad u hooseeya, oo farqiga u dhexeeya rollers riixaya waa in la hagaajiyaa, guud ahaan hoos u 2-3 mm.
2) Fiiro gaar ah u yeelo radial-ka iyo wareega wareega ee rullaluistemadka cadaadiska, mana noqon karto mid elliptical ah.
3) Waxaa jira aqoon badan oo ku saabsan xulashada bar taabashada. Hada warshado aad iyo aad u tiro badan ayaa dooranaya inay isticmaalaan ulaha cadaadiska ee xiriirka sida giraangiraha (rollers press). Tani waa ikhtiraac weyn, laakiin wali waxaa jira xaalado badan oo ay hawlwadeenadu ugu baahan yihiin inay saxaan cadaadiska.
4) Qiyaasta koollada waa inaysan noqon mid aad u ballaaran, si aysan u keenin cillad ku timaadda Lengfeng. Maaha in inta ay le'eg tahay xaddiga xabagta, ay sifiican ugu habboon tahay, waa inaan fiiro gaar ah u leenahay caanaha caanaha iyo habka wax soo saarka.
(5) Suunka dharka
Suunka shiraaca waa in si joogto ah loo nadiifiyo hal mar maalintii, waana in suufka shiraaca la nadiifiyaa toddobaad kasta. Guud ahaan, suunka shiraaca ayaa lagu qooyay biyo in muddo ah, ka dib marka la jilciyo, waxaa lagu nadiifiyaa burush silig ah. Weligaa ha isku dayin inaad daqiiqad kaydiso oo aad sababto waqti dheeri ah inaad lumiso marka isku soo wada duuboo ay gaaraan heer cayiman.
Si loo soo saaro alaab tayo sare leh, suumanka shiraacda ayaa looga baahan yahay inay lahaadaan hawo wanaagsan. Ka dib markii la gaaro waqti cayiman, waa in la beddelaa. Ha u horseedin in kartoonka la qallo kharashka ku meel gaarka ah awgiis, faa'iidaduna waa ka badan tahay khasaaraha.
(6) Rullaluistemadka cadaadiska
1) Tiro macquul ah oo rollers cadaadis waa in la isticmaalaa. Xilliyada kala duwan, tirada rollers cadaadiska loo isticmaalo waa ka duwan yahay, waana in lagu hagaajiyaa waqtiga sida ay xaaladda dhabta ah.
2) Tilmaamaha shucaaca iyo axial ee rullaluistemadka cadaadis kasta waa in lagu xakameeyaa 2 fiilo gudahood, haddii kale rullaluistemadka cadaadiska oo leh qaab oval ah ayaa buuxin doona jiingadaha, taasoo keenaysa dhumuc aan ku filnayn.
3) Farqiga u dhexeeya rullaluistemadka cadaadiska iyo saxanka kulul waa in la hagaajiyaa, oo looga tagayaa qolka hagaajinta wanaagsan, kaas oo lagu hagaajin karo iyadoo loo eegayo qaabka (dhererka) jiingadda.
4) Waxaa lagugula talinayaa in soosaarayaasha kartoonku ay isticmaalaan taarikada cadaadiska kulul halkii ay ka rogi lahaayeen rollers, dabcan, ujeedada ayaa ah in heerka howlgalka shaqaalaha ay tahay inuu gaaro heerka isticmaalka qalabka otomaatiga ah.
(7) Qaybta dambe ee xariiqda lebenka
Albaabka iyo ka bixida mindi goynta iskutallaabtu waa inay isticmaalaan qalab qorraxda ku habboon. Guud ahaan, waa 55 darajo ilaa 60 darajo oo leh tijaabiyaha adag ee Shore si looga fogaado burburka kartoonka.